Kabashada VS Card Wondershare Data Recovery
Recovery Card waa aalad sawir kabashada kaarka SD isticmaalaan Ama telefoon ama camera. Waxaa loo isticmaali karaa si ay u soo ceshano photos iyo video laga badiyay, formatted, tirtiray iyo ka kaadhka xusuusta kharribeen. Waxa ay taageertaa badan oo kaararka xusuusta ay ka mid yihiin oo aan ku xaddidnayn SDHC, Compact Flash, kaarka SD, xusuusta ul iyo kaarka sawirka XD. Recovery Card isticmaalaan hab Wizard aad ku hogaamiyay inay tallaabo ah oo sahlan inuu ka soo kabsado xogta aad. Qalabkani waxa uu yahay dib u soo celineysa dib sawiro iyo videos aad ee qaab asalka aan ku beddelaan.
Wodershare Data Recovery waa aalad awood loo adeegsado soo kabsaday xogta laga badiyay. Tani aalad online waxaa loo isticmaali karaa inuu ka soo kabsado ku dhowaad dhammaan noocyada file oo ay ku jiraan video, MP3 music, sawir, fariimaha, email, archives, iyo waraaqaha. Haddii aad files badiyay iyadoo la tirtirayo bin recycle, kaadhka xusuusta, Flash saxan, camera digital ah ama aaladaha kale ee dibadda Wondershare weli heli kartaa dhabarka. Software Tani soo kaban karto, faylasha loo eegin sida khasaaro xogta ka dhacay. Tan waxaa ka mid formatting, takhalusid ula kac ah oo aan ula kac ahayn, kaadhka xusuusta kharribeen iyo maaraynta aan habboonayn ee qalabka sida deeruhu soo baxay halka weli la isticmaalo iyo il awoodeed oo failure.
Wondershare Data Recovery Kasoo horjeeddo Card Recovery
Oggolaanayaa Falanqeynta sawirrada ka hor inta soo kabashada
u qabata akhriyaan oo kaliya hawlaha
User uma baahna xirfadeed si ay u isticmaalaan software ah.
helay video, audio, sawir laga badiyay
Marka laga sababta dhego beelidda xogta.
Qabata akhri hawlgallada kaliya ee kaadhka xusuusta
software wuxuu taageeraa kaararka xusuusta leh awoodda kaydinta kala duwan
helay files lumay MMC
Khasaaraha Data ay sabab u tahay formatting ee kaadhka xusuusta
aan ulakaca ama ulakac u tirtira ee file
kharribeen kaadhka xusuusta sababtoo ah xidhiidh computer cudurka
Loss of files halka baadi partitioning ama xijaab
filayn il awoodeed oo khasaaro sababaya maqal la'aan ah files
Loss xogta ay sabab u tahay kaadhka xusuusta saaro halka ku saabsan isticmaalka
Kharribeen kaadhka xusuusta
Photos gaartay iyadoo ay sabab u tirtirto dhammaan ama formatting
xogta Dhaawac uu deminta camera halka ku saabsan isticmaalka
Loss of photos ay sabab u tahay iyadoo la isticmaalayo kamaradaha ama qalab kala duwan oo
ku kharribeen xogta keena meelaha muhiimka ah dhaawac sida xididka, kabaha ama baruurta.
Audio (M4A, regelingen, OGG, WMA, MP3 ...)
Archives (rar, ZIP, fadhiisan ...)
Waraaqaha (HTML, EPS, DOC, PDF, CWK, INDD ...)
Photos (WMF, DNG, CR2, JPG, cayriin, PNG, DCR, GIF, PSD, ERF ...)
Message iyo Email (DBX, PST, EMLX ...)
Audio (Amr, regelingen, MP3 ...)
Ceeriin Image (Sony, DNG, Olympus, Samsung, Pentax PEF ...)
Recycle bin (Laptop, PC, Handy, Mac ...)
Drives Flash (eryi Jump, Thumb kaxeeya, USB kaxeeya, Pen eryi ...)
Kaararka Memory (XD, kaarka Warbaahinta, Compact Flash, SDHC, SD, Micro SD, SmartMedia ...)
Camera Digital ama fiidiyo (Sony, Kodak, Canon, Nikon, JVC ...)
Drives saari karo (Apple, WD, Toshiba, Samsung, Seagate ...)
Hard drives (Dell, Toshiba,
Kamaradaha (Olympus, Canon, Fujifilm, Kodak, Panasonic, Nikon ...)
Wata magac Phone (Blackberry, Android, Samsung ...)
Kaararka Flash xasuusta (Lexar, PNY, Panasonic, Kingston, Sandisk, ajende, FujiFilm ...)
Price Miyuu tijaabo ah soo kabashada Free 100MB
Or ku iibsan karaa $ 24.95 Hel tijaabo ah oo lacag la'aan ah
Or ku iibsan karaa $39.95
Sidee inuu ka soo kabsado xogta laga kaadhka xusuusta isticmaalaya Wondershare Data Recovery
Si aad u soo kabsado xogta aad lumay kaadhka xusuusta, waxaad u baahan tahay software kabashada xogta. Wondershare Data Recovery Waa qalab ka soo kabashada xogta ugu wanaagsan ee caawin doona in aad dib u soo ceshano aad files badiyay eegin sida khasaaro xogta dhacay. Download software-ka, soo dajiyo iyo waxa maamula on your computer. Ha gashato meesha ku kaadhka xusuusta, laakiin qalab lagu kaydiyo si ammaan ah. Waa kuwan tallaabooyinku sahlan oo ay raacaan inuu ka soo kabsado xogta aad ka kaadhka xusuusta.
Step1 Connect kaadhka xusuusta
Connect kaadhka xusuusta in kombuutarka la isticmaalayo akhristaha card ama USB drive. Hubi in kaarka si fiican u xiran. Burcad barnaamijka dib u soo kabashada iyo guji Start si ay u bilaabaan dib u soo kabashada ee xogta aad laga badiyay.
Step2 Dooro kaadhka xusuusta iyo iskaan
Haddii PC aqoonsan kaarka, waxaad arki doontaa waxaa ka mid ah liiska drives on your shaashadda ka muuqan. Dooro kaadhka xusuusta iyo ku dhacay oo ku Scan xaq button aad xaq ugu hooseysa. Habkani waxaa bogsan doonaan oo dhan files lumay adigoo tirtirka, formatting ama kaarka kharribeen.
Waxaad dooran kartaa in shaandhayso noocyada files in la soo kabsaday oo isticmaalaya Xulashada Filter . Fursaddan waa sahlan oo dhakhso ah si ay u isticmaalaan.
Tallaabada 3 Ladnaansho faylasha aad
Ka dib markii iskaanka dhex yahay, u tag iyada oo files soo kabsaday soo bandhigay natiijooyinka iskaanka ah. Dooro faylasha aad rabto in aad barnaamijka si loo soo celiyo oo ku dhacay on Ladnaansho button.
Ka dib markii aad aad soo kabsaday files ka kaadhka xusuusta, iyaga halkii ay badbaadin in kaydinta warbaahinta ka duwan kaadhka xusuusta asalka
Waxa aan door bidayaa Wondershare Data Recovery in Card-kabashada. Waa maxay sababta?
Marka hore, waa Wondershare Data Recovery ayaa sidoo sifaatka aad u sareeya la siiyaa xaqiiqda ah in uu soo kaban karto, files ka ugu nooc ama qaabab faylasha loo eegin sababta dhego beelidda xogta.
Barnaamijkan waxaa loo isticmaali karaa inuu ka soo kabsado ma aha oo kaliya laakiin sidoo kale sawiro Cajalado, videos, waraaqaha xafiiska, archives, fariin, iyo emails. Arrinta gunteedu waa barnaamijkan waa ka sii horumaray badan software Recovery Card.
> Resource > Memory Card > kabashada Card VS Wondershare Data Recovery, waxa aad ugu jeceshahay?